Iindaba -eCnc umzila weNzuzo
I-CNC router isetyenziswa ngokubanzi kumzi-mveliso wokhuni kule minyaka idlulileyo, inokukunceda ukunciphisa iindleko zemveliso.
1.Ingathatha indawo yokusebenza yesintu, yonyuse ukusetyenziswa kwezinto! Ukunciphisa inkunkuma yezinto eziphathekayo, ngaloo ndlela unciphisa iindleko zezixhobo.
2. Gcina abasebenzi, umntu omnye unokusebenzisa oomatshini abaninzi.
3. Yonke imilinganiselo yamanani ibalwa ngekhompyuter ngokuchaneka okuphezulu.
4. Iofisi yomatshini inokuxhonywa nangaliphi na ixesha, yonyuse okanye yehlise isantya, ilungelelanise ubunzulu, njl.
I-CNC Router ihlukaniswe ngokukodwa kumatshini wokusika we-CNC, inkqubo yokusika inkqubo emininzi, kunye nesixhobo sokutshintsha izixhobo esizenzekelayo. Umatshini wokusika we-CNC sisixhobo esikhethekileyo sokusika, ukubhola kunye nokugaya imisele yefenitshala eyenziwe ngokwezifiso. Ifanelekile kwiikhabhathi zewadi, iikhabhathi, iidesika zekhompyuter, ifenitshala yefenitshala, ifenitshala yeofisi, izithethi zomthi, izixhobo zekhitshi ezenziwe ngomthi kunye nezinye ifanitshala yephaneli. Ukucwangciswa okuncedisayo njengokubhabha inqwelomoya, ukugaya, ukubetha, ukubetha, kunye nokukrola. Ngenxa yokusebenza kwayo ngokuzenzekelayo kunye nemveliso, ukugcina ixesha, ukugcina abasebenzi kunye nexabiso lokugcina iindleko, kuthembekile sisininzi sabenzi befanitshala.
Imizi-mveliso esebenzayo: ifanitshala yephaneli, iikhabhathi zekhabhathi, iikhabhathi zewadi, ifenitshala yesiko, ifenitshala yeofisi kunye neengcango zangaphakathi kunye neengcango ezityibilikayo, iiphaneli zeminyango yekhabhinethi kunye namanye amashishini.
Imisebenzi ephambili: utshintsho lwezixhobo ezizenzekelayo, ukusika, ukugaya, ukuxhoma, ukubetha, ukubetha, njl.
Le yokuluka-CNC CNC umzila ezine imodeli nenoqoqosho kwaye zifikeleleke neentloko ezine itshintshele ngokuzenzekelayo, nto leyo ukuqonda amanyathelo ezine umsebenzi oqhubekayo. Inkqubo yokusika yomatshini-ezine inokuziqonda zombini umzimba wekhabhinethi kunye nepaneli yomnyango, oko kukuthi, zombini umzimba wekhabhinethi kunye nepaneli yomnyango ingaqwalaselwa, kodwa ukusebenza kakuhle kwemveliso kungaphantsi kunaleyo yokusika inkqubo yokusika umatshini, ilungele ngakumbi ezinye iinkampani zefenitshala ezincinci neziphakathi eziqala nje. Isiko sokutshintsha isixhobo sokutshintsha izixhobo senziwe nge-9kw shaft ephambili kunye nemagazini yesixhobo sokubhola. Eli phephancwadi linezixhobo ezisi-8, izixhobo ezili-12, izixhobo ezili-16 kunye nezixhobo ezingama-20. Kwinkqubo yokwenza, i-9kw yokuluka izakuya ngokuzenzekelayo kwiphephancwadi lesixhobo ukuyokulanda isixhobo ngokweemfuno. Le yokuluka 9kw nga kugqitywa ukuba processing imilo emnyango, iipateni nokukrola, hollowing ngaphandle iipateni, ukusika kunye ukusika grooves. Kufanelekile kwabo bafuna ukwenza iikhabhathi kunye nemilo yomnyango, kwaye ukongeza ii-lattice ezikroliweyo amaxesha ngamaxesha. Sebenzisa indawo yediski yokutshintsha isixhobo ukwenza iiphaneli zeminyango yekhabhinethi, kwaye ngokuzenzekelayo utshintshe isixhobo ukugqibezela zonke iinkqubo zokwenza ucango lwekhabhathi ngexesha elinye, ukuphelisa isidingo sotshintsho lwezixhobo, ukuphucula ukusebenza kokusebenza kunye nomgangatho wemveliso.
Ixesha Post: Jun-21-2021